रुविभ्यालीमा जयावीरको क्रियशन, यसरी देखाए गीतमा मनमोहकता (फोटो फिचर) | .:: Welcome || Paryatannews
Home » फ्ल्यास न्यूज » रुविभ्यालीमा जयावीरको क्रियशन, यसरी देखाए गीतमा मनमोहकता (फोटो फिचर)
रुविभ्यालीमा जयावीरको क्रियशन, यसरी देखाए गीतमा मनमोहकता (फोटो फिचर)
चलचित्र छायांकन गर्ने क्रम बढ्दो
पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । धादिङ जिल्लाको उत्तरी भेग अर्थात रुविभ्याली क्षेत्र अब पर्यटनका लागि मात्र सिमित रहेन । त्यहाँको सुन्दरता, मनमोहकता र सँस्कृतिले अब म्यूजिक भिडियो र चलचित्रका निर्देशकहरुलाई समेत तान्न थालेको छ ।
पछिल्लो समयमा रुविभ्याली चलचित्र छायांकनका लागि व्यस्त गन्तव्यको रुपमा विकास हुन थालेको छ । रसुवाको गत्लाङबाट प्रवेश गरेर धादिङको रुविभ्यालीहुँदै गोरखाको चुमभ्यालीसम्मको यात्रा गर्न सकिने सो पदमार्गमा हिजोआज दिन विराएर छायांकनहरु हुन थालेका छन् । फरक समयको फरक दृश्य कैद गर्न म्यूजिक भिडियोदेखि छलचित्र छायांकन गर्नेहरुसम्म पुग्न थालेका छन् ।
यसैबीच, गायक जयावीर तामाङले पछिल्लो समय दुई नयाँ गीत रुविभ्याली आसपासमा छायांकन गरेका छन् भने गीतमा रुविभ्यालीकै वर्णन समेत गरेका छन् । उनले ‘रुविभ्याली’ र ‘लिन्जो नमस्ते’ नामका दुई म्यूजिक भिडियो भर्खरै सार्वजनिक गरेका छन् । रसुवाको गत्लाङदेखि सोमदाङ गाउँ, पाङसाङपास, सिंलापास हुँदै तिप्लिङ, सेर्तुङ आसपासको क्षेत्रका रमणीय दृश्यहरुलाई म्यूजिक भिडियोमा समावेश गराएका छन् । म्यूजिक भिडियोमा देखिएका केही मनमोहक दृश्यः
रुविभ्यालीमा जयावीरको क्रियशन, यसरी देखाए गीतमा मनमोहकता (फोटो फिचर) Reviewed by Shiva Shrestha on Jul 03 . पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । धादिङ जिल्लाको उत्तरी भेग अर्थात रुविभ्याली क्षेत्र अब पर्यटनका लागि मात्र सिमित रहेन । त्यहाँको सुन्दरता, मनमोहकता र सँस्कृतिले अब म्यू पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । धादिङ जिल्लाको उत्तरी भेग अर्थात रुविभ्याली क्षेत्र अब पर्यटनका लागि मात्र सिमित रहेन । त्यहाँको सुन्दरता, मनमोहकता र सँस्कृतिले अब म्यू Rating: 0